Ukufunda ukunandipha umsebenzi
Kutheni ndifuna umsebenzi? Ukuze ufumane imali, ngokuqinisekileyo uqinisekisa ukuba khona kwayo. Kuhle xa lo msebenzi ufana. Kwaye ukuba akunjalo?
Ngoko kufuneka ufumane izizathu zokuthi kungani ungayithandi.
-I-ofisi enobungqingili kunye neenxuwa
-kukwenza into engalunganga
Izizathu zifumene, kwaye yintoni na ngoku? Ukufunda ukuzonwabisa, makungabi lula, kodwa unokufunda. Ukuphelisa izizathu zokunganeliseki kwakho.
Umsebenzi ube ngumsebenzi? Ukuba yonke into imhlophe, sebenza eofisi, kwaye akukho nto inomdla kwisitalato, kuphela ngenxa yobuvila bakho. Ukwahlula ubomi bakho. Yiya kwimidlalo, kwiimidlalo, kwaye u tyelele nje. Unokuyihobisa ukuhlala kwakho eofisini kunye nabantu abambalwa onokuthetha nabo ngezihloko ezingahambelani nomsebenzi.
Usuku lonke uhlala phantsi kwetafile, izindonga eziqhawulayo kunye nakho konke oku, ngokuqhelekileyo kumathoni amnyama, beige kunye namnyama. Kube nzima kangakanani? Nantsi unendawo yokubhabhisa imbali. Thenga izinto zokubhala ezimibalabala, kuphela ngemali yakho, kungekhona kwenkampani, ngoko ke uya kunciphisa "ipenki yakho". Faka phezu kwetafile ikhalenda ekhalisiweyo, faka isikhumbuzo esincinci esiluthandayo (kukulungele ukuza ekhaya, ngoko kuya kukhululeka). Kwaye kubaluleke kakhulu - gcina indawo yakho yokusebenzela icocekile, kwaye uya kuvuya kwaye oogxa bakho baya kuqonda.
Ukoyika ukwenza into engalunganga. Imizamo yemihla ngemihla yokwenza umsebenzi wabo ngokuqinisekileyo ibangela uxinzelelo. Kodwa uyakhohlwa ukuba bonke abantu benza iimpazamo ngaphandle kokungafani. Ngaphezu koko, kwiimpazamo zabo abantu bafunda ngokukhawuleza nangakumbi. Yaye khumbula ukuba nayiphina impazamo ingalungiswa, kakuhle, okanye ubuncinci, ikhululiwe.
Ubudlelwane kwiqela lichaphazela kakhulu imeko yakho yangaphakathi. Uninzi lwabantu, ukuze baziphazamise, njengokuba baqala ukuhleba emsebenzini, kwaye ekugqibeleni kubangela ukungathembeki komnye nomnye. Isisombululo asikho ukuhleka, kodwa ukuba awukwazi ukuwuphepha, ke uthetha into enhle kuphela. Isiphumo - ubuncinane awuyi kuxabana nabani na. Kwaye mhlawumbi uya kuyonwabela umsebenzi.
Kwaye kubaluleke kakhulu ukuzama ukuphazamiseka emsebenzini! Ngexesha lesidlo sasemini, endaweni yokuya kwigumbi lokudlela okanye ukuyalela ukutya eofisini, uye kwindawo yokutya epholileyo apho ungayi kukhunjulwa nantoni na ngomsebenzi. Cinga ukuba uhlala eholidini kwaye akudingeki ukuba ugijime naliphi na indawo (ungayidluli, okanye ungakwazi ukuza emva kwexesha lesidlo, kungekuhle kakhulu). Hamba ekhaya ngokukhawuleza emva kokuphela kosuku, ungalibali (kwesi sixwangciso sesithandathu okanye iiyure ezingama-30 zesiganeko esithile, into enjengomhla okanye uhambo ukuya echibini, i-cinema). Xa usendleleni eya ekhaya, uye kumntu oza kumtyelela okanye uhambe uye kuthengwa. Xa ufika ekhaya, cima ifowuni yakho yeselula uze uzame ukungakhangeli kwi-imeyile. Kungcono ukuhlala kude nefowuni kunye nekhompyutha. Yenza ngokubukela iTV, ukwenza isidlo sakusihlwa okanye ukuhlala kunye nosapho lwakho.
Kwaye, ke, ungalibali ukuthatha iholide. Nangona unomsebenzi obalulekileyo malunga nomsebenzi wakho, awudingi ukulibala into enjalo ngokuthi "shiya." Yintoni na? Kuphumla komphefumlo nomzimba. Cinga ngako. Sondela kumphathi kwaye unike isicelo sakho. Kwaye ngoko nayiphi into embi kakhulu emsebenzini ayikwenzeka. Umsebenzi awuyi kuyeka ngaphandle kwakho kwaye iqumrhu liya kukhangela. Cwangcisa uhambo oluncinane okanye wenze iiveki ezimbini zezinto ezizithandayo kakhulu.
Ukuba kuwe nayiphi na into ayinakunceda, unokuhlala uyeka kwaye ufumane into efanelekileyo. Into ohlala uphupha ngayo. Yaye ukuba ibhizinisi lakho ozithandayo lingenise imali engenayo, ngoko unako ukwenza njalo ngexesha lakho lokuzimela. Emva koko uya kuba neemeko ezintle kunye nentembelo kwikamva!
Indlela yokuhlala kwindawo ehloniphekileyo
Sebenza Ekhaya: Iingcamango Zorhwebo Elingundoqo
Ngendlela efanelekileyo ukubuyisela umdla kumsebenzi?
Umtshato we-horoscope ngo-2017 kwimimiselo ye-zodiac: Ngubani onyakeni omtsha ofuna ukudlala umtshato
Isihluthulelo sikhokelela ekuthobeleni kwaye sidonsa abangathobeliyo
Ukuhlengahlengiswa komzimba okungapheliyo
Jam ukusuka e-feijoa ngaphandle kokupheka, iresiphi yokudibanisa ubomi kunye nesithombe
Izifo kunye nabahlaziyi be-begonias
Ukuxilongwa, usongelo lokuzalwa kwangaphambi kokuzalwa
Indlela yokuphumelela i-oligarch okanye icebiso ngokuphumelela umntu ocebileyo
Amazwe angama-TOP-5 angafuneki i-visa
Indlela yokukhangela imali nokuchuma kwindlu?
I-Broccoli enomzimba womhlaba
Iimpawu ezincedo zeentlanzi kumzimba womntu
Intsingiselo yomtshato womfazi okhulileyo
U-Anna Semyonovich waqala ukuthetha ngomama
Ilayisi kunye ne-shrimps kwi-multivark
UStanislav Sadalsky wavula inyaniso malunga nobuhlali bobabini boMakvava
Iibhaki ze-Eggplants kunye neTatates